Ku qor qoraalkayga Somalia
Warqad Cilmi baaris ah
Qiimaheena Dalbo hadda
Ma u baahan tahay caawimaad qoris xirfadeed? Ka hel warqad tayo sare leh Qor Qormadeyda ugu wanaagsan Somalia ku qoran dhammaan heerarka tacliimeed.
Macaamiisha Ku Qanacsan
Heerka soo celinta macaamiisha
Ku celi Macaamiisha
Xatooyo ma jirto
Buug-gacmeed bilaash ah
Diyaar ma u tahay inaad dalbato?
Haddii aad rabto inaad hesho 100% waraaqaha asalka ah ee qiimaha la awoodi karo, ka dib noogu tiirsan. Waxaa la joogaa waqtigii lagu kobcin lahaa guushaada tacliimeed iyadoo la adeegsanayo adeegga qorista shahaadada aasaasiga ah ee gudaha Somalia
Sarkaalka Sare ee Fulinta
Madaxa Suuq geynta
Qor Qormadeyda - Sida Loo Helo Shahaadooyin Tayo Leh
Haa, adiguba waad iibsan kartaa qoraalka oo waxaad ku heli kartaa dukumiinti aan cillad lahayn oo ku saabsan shahaadadaada. Adeegyo badan oo qoris ah ayaa ka raqiisan shaqaalaynta ardayga jaamacadda dhabta ah. Si kastaba ha noqotee, haddii aad runti rabto inaad iibsato shahaadada markaa waxaa jira shirkado badan oo la isku halleyn karo oo aad tixgelin karto. Halkan waxaa ku yaal tilmaamayaal ku saabsan sida loo doorto adeegga qoraalka.
Waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay inaad eegto waa nooca khibradeed ee shirkaddu leedahay. Waxaad ubaahantahay inaad ogaato mudada ay kujireen warshada iyo nooca macaamiisha ay lashaqeeyaan. Way fiicnaan laheyd in shirkada laf ahaanteeda wax laga weeydiiyo haddii ay horey u lahaayeen macaamiil iyo nooca macaamiisha ay la joogeen.
Waxa kale ee la sameeyo waa inaad la hadasho macaamilka kahor intaadan dhameystirin shirkad. Waxaad rabtaa inaad hubiso inaad la macaamilayso shirkad sumcad leh oo lagu kalsoonaan karo. Waqtiga intiisa badan, shirkadaha leh sumcad xumo waxay uun u gacan-gelin lahaayeen mashaariicdooda dalal kale oo ay lacag badan ka qaadaan adeegyadooda. Sidoo kale waa inaad awood u yeelatid inaad weydiisatid inay shati u leeyihiin iyo inay caymis leeyihiin.
Markaad doorato shirkad aad ku iibsato qoraalkaaga, waxaa ugu fiicnaan laheyd inaad ka wada hadasho shuruudahaaga iyo waxa aad doorbideyso. Haddii aad xiisaynayso nooc ka mid ah adeegga, waxaad u baahan doontaa inaad hubiso inay ku siin karaan adeeggaas. Waxaad sidoo kale u baahan doontaa inaad hubiso in adeeg bixiyaha uu yahay mid sumcad iyo xirfad leh. Shirkad adeeg oo si fiican u dhisan ayaa kaa caawin doonta wixii arrimo farsamo ama dhibaatooyin ah ee ka dhasha inta hawshu socoto.
Mid ka mid ah bixiyeyaasha adeegga ee aad ka fiirsan karto inaad iibsato buugaag ayaa ah inay heli karaan nuqul ka mid ah qoraalkaaga oo lagu dhammaystiro 24 saacadood gudahood ka dib markaad bixiso adeegyadooda. Sidan, haddii aad la kulantid arrimo ama dhibaatooyin, ma aha inaad wax ka qabato muddo dheer.
Xitaa waad codsan kartaa muunad ka mid ah qoraalka oo aad jeclaan lahayd inaad ka hesho iyaga maxaa yeelay waxay leeyihiin degel u gaar ah. Waxay sidoo kale ku siin karaan muunado ay mar hore qori lahaayeen oo dib u eegi lahaayeen. Waxa ugu wanaagsan ee ku saabsan adeegyadan ayaa ah inay sidoo kale ku siin doonaan nuqulo ka mid ah kuwii hore ee ay heleen.
Si lagaaga sii caawiyo inaad go'aan ka gaartid adeeg bixiyaha qorista saxda ah, waxaad sidoo kale u baahan kartaa inaad hubiso dib u eegisyadooda. markhaati iyo tixraacyo. Raadi ra'yi-celin iyo dib-u-eegis ku saabsan shirkadda noqon doonta midka ku siin doona waayo-aragnimo lagu qanco. Si kastaba ha noqotee, guusha qoraalkaaga ayaa ah waxaad daba socoto.
Ha niyad jabin markaad iskudayeyso inaad qorto qoraalkaaga. Hadaad sameyso, dhib ayaad kala kulmi doontaa mararka qaar laakiin tani waa iska caadi. Xusuusnow in wax walbaa aysan si hagaagsan u socon doonin.
Si loo hubiyo inaad helayso waxa ugu fiican, hubi inaad iska hubinaysid adeeg bixiyaha hal mar dhowrkii biloodba. Waad kula xiriiri kartaa taleefan, emayl ama xitaa u soo dir email si aad ugu sheegto inaad wali ka shaqeyneyso mashruucaaga.
Ka dib markaad hesho adeeg bixiye, waa inaad sidoo kale hubisaa inaad heleyso nuqul ah shahaadadaada markii aad hesho warbixintooda dhammeystiran. Sidan, haddii wax uun ku dhacaan koobigaaga buugaagta, marwalba waad ku noqon kartaa asalka.
Hubso inaad weydiisato asalka ama nuqulka shahaadadaada markaad gudbineyso. Sidan oo kale, qoraalkaagu wuxuu leeyahay akhrinta iyo tafatirka lagama maarmaanka ah waxayna dammaanad ka qaadi lahayd inay sax tahay.
Ugu dambeyntiina, waxaa muhiim ah inaad hubiso inaadan saxeexin wax kugu xidhi kara bixiye cayiman marka heshiiska la dhammaystiro. Waxaa ugu wanaagsan inaadan saxiixin wax heshiis ah kahor intaadan ogaanin heshiiska dhabta ah, si aad naftaada u ilaaliso.
Xidhiidhyo Faa'iido Leh
Qoraallo iib ah
© Copyright 2020 DissertationTogether-somalia.online. All right reserved.
Dooro wadan kale
Si looga dhigo boggan mid adiga kugu habboon DissertationTogether-somalia.online isticmaalaa buskudka. Akhriso kaayaga siyaasadda cookie.